Montana Log Home Ukuhlala kwindawo efana nepaki.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguHal And Marie
Ikhaya lelog yaseMontana kwindawo efana nepaki evakala ngathi yintlango, kunye nendlu eyongezelelweyo yeendwendwe enokuqeshwa ngokwahlukeneyo xa ifuneka kwiindwendwe ezongezelelweyo. Ingaphakathi elimnandi ligqibezela ngomgangatho womthi, ikhaphethi kunye neefestile ezininzi. Zigcine upholile ngesitovu seenkuni kunye nazo zonke iinkuni oya kuze uzifune.
Ineeveranda ezigqunyiweyo, iidekhi kunye nesimbo sokwenyani saseMontana. Inengca eluhlaza, ipines ezinde kunye nedama kunye neentyatyambo zasendle. Kukho ibarbecue enkulu yangaphandle enazo zonke izixhobo ezifunekayo ukwenza izosa. Ikhitshi linikezelwe ngokupheleleyo kuzo zonke iimfuno zakho zokupheka kunye nokuphakela.
Indawo yasentlango, kodwa ikufutshane kakhulu eHamilton naseDarby eneendawo zokutyela ezintle kunye nazo zonke izinto eziluncedo kwiidolophu ezincinci.
Umbuki zindwendwe ngu- Hal And Marie
Sisondele kuzo naziphi na iimfuno okanye ukunxibelelana nje kwaye sabelane ngothando lwethu nolwazi lwale ndawo.
UHal And Marie yi-Superhost